Misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana isam-paritra ny Eden Lodge Madagascar
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana isam-paritra ny Eden Lodge Madagascar
Aogositra 29, 2018
Ny mpikambana ao amin'ny Green Globe, Eden Lodge Madagascar, dia nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fampivelarana ny hetsika maintso ao aminy.
Anisan'ny fomba fanao tsara indrindra hanatsarana ny fampandrosoana isam-paritra ny mpikambana ao amin'ny Green Globe, Eden Lodge Madagascar, nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olon-dehibe sy ny ankizy ao anatin'ny fiarahamonina eo an-toerana sy ny fampivelarana ny hetsika maintso ao aminy.
Ny Eden Lodge, miorina amoron-dranomasina Baobab, dia mipetraka sy mizara ny bay miaraka amin'ireo mponina eo an-toerana. Ny mpiasa sy ny mponina dia miara-miasa amin'ny tetik'asa iraisana samihafa izay mandray anjara amin'ny fitomboan'ny harinkarena eo an-toerana. Ny Vohitra Anjanojano, fonenan'ny mponina manodidina ny 300, dia eo amin'ny 200m miala ny Lodge. Mba hanatsarana ny asa fivelomana, dia mampiasa olona vitsivitsy ny Eden Lodge ary mividy trondro isan'andro amin'ireo mpanjono. Nanome fotodrafitrasa tena ilaina ao amin'ny faritra i Eden Lodge. Nanome fanampiana ara-bola hamatsiana fantsakana amin'ny 2012 izy io, nanangana tranokala fanangonana fako amin'ny 2016 ary trano fidiovana vaovao no hatsangana amin'ny taona 2018.
Miara-miasa akaiky amin'i Docenda, fikambanana frantsay i Eden Lodge, hanampiana ireo mpianatra amin'ny sekoly akaiky. Ny sekoly ambaratonga voalohany dia natsangana tamin'ny 2014 ary eo anelanelan'ny 120 sy 140 ny ankizy ary 7 ny mpampianatra. Ny Lodge, miaraka amin'ny Electriciens sans Frontières (herinaratra tsy misy sisintany), dia nametaka takelaka masoandro nandritra ny fananganana ny sekoly voalohany. Ankoatr'izay, satria tsy misy departemanta fitantanana ara-dalàna ao an-tsekoly, ny Lodge dia manolotra serivisy fitantanan-draharaha hitantanana ny fandoavana karama ho an'ny mpampianatra mpampianatra ary hanampy amin'ny fizarana kojakoja ilaina isan'andro toy ny vary sy savony. Eden Lodge sy Docenda koa dia mirotsaka amina tambajotranà sekoly any amin'ny faritra misy an'izany Village Ambatokisindra, izay misy sambo adiny iray avy ao amin'ilay trano. Ny Lodge dia manome fanohanana lojika amin'ny endrika fitaterana (sambo) hitsidihan'ny mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena.
Ny fikarakarana ny fahasalamana ho an'ny ankizy dia laharam-pahamehana ihany koa ao Anjanojano. Eden Lodge dia mandoa ny antsasaky ny karaman'ny mpitsabo mpanampy iray monina ao an-tsekoly ary ny sekoly kosa mandoa ny ambiny. Hopitaly maimaimpoana feno fanafody no miasa ary mpitsabo avy any La Reunion no mitsidika isaky ny telo volana.
Eden Lodge dia manohy ny fampandrosoana ny faritra maintso ao amin'ny nosy mba hampirisihana ny fizakan-tena. Zavamaniry misy zavamaniry sy hazo teratany toa ny lavanila, voankazo Jack, mananasy, akondro, papay, voasarimakirana ary kakaô no namorona akora vaovao ho an'ny lakozia. Ary koa, legioma biolojika ao anatin'izany ny tsaramaso, voatabia, salady, laisoa, Brede Mafana, zucchini ary koa anana toy ny basil, persily ary mint dia ambolena amin'ny zaridaina eo an-toerana.
Mifanaraka amin'ny fomba fambolena maharitra, ny gisa, gana, akoho amam-borona dia amboarina ho an'ny hena sy atody. Ny fako biolojika avy any an-dakozia dia ampidirina ho antontany sy fotaka mainty, ahidratsy maina ary ravina dia atao mulch ao anaty zaridaina. Ny kotsa Zebu (omby bongo), ravin-paraky sy ny fako maintso rehetra dia ampiasaina amin'ny zaridaina sy ny manodidina ny faritra feno ala.
Glasgow tantaram-pitiavana: Aiza no hahalala sy handany tantely?
Nanontany ny mpamatsy fiara lehibe indrindra manerantany: “Tsara kokoa ve ny lehibe kokoa?”